Hogaamiye Caan ka ah Dunid oo shaaciyey nukliyeerka dalkiisu haysto & Wuxu ku falaayo | Qaran News
Hogaamiye Caan ka ah Dunid oo shaaciyey nukliyeerka dalkiisu haysto & Wuxu ku falaayo
Writen by Qaran News | 1:41 pm 29th Jul, 2020
Hogaamiyaha kuuriyada waqooyi, Kim Jong-un ayaa sheegay in uu aaminsan yahay in dalkiisa uusan u bahnaan doonin in uu dagaal galo, wuxuuna tilmaamay in nukliyeerka uu waddankiisa ka difaacayo dagaal.
“Inta aan heysano hubka aan isku haleyn karno ee waxtarka leh ee nukleerka, dagaal dambe kama dhici doono adduunka, ammaanka iyo badqabka dalkeenana wuxuu waligi ahaanayaa mid la isku hubo,” ayuu yiri Kim oo khudbad jeedinayay.
Hadalkan ayuu ka sheegay munaasabad loogu dabaaldegayay 67 sano guuradii ka soo wareegatay markii uu dhamaaday dagaalkii labada Kuuriya.
Munaasabadda lagu qabtay magaalada Pyongyang, waxaa lagu maamuusayay dadkii Kuuriyada Waqooyi uga qeyb qaatay dagaalkaas.
Kim ayaa sidoo kale sheegay in dalkiisa uu horumariyay hubka nukliyeerka, “si uu ugu guuleysto ka hortagga dagaal kale”.
“Waxaan hadda u diyaarsanahy in aynu iska difaacno khatar walba oo militari”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Hadalka Kim Jong-un wuxuu markale hoos ka xariiqay in hogaamiyaha dalkaas uusan diyaar u ahayn in uu wareejiyo hubka nukliyeerka ee uu dalkiisa heysto, inkastoo dowladda Mareykanka ay isku dayday in Pyongyang ay ka tanaasuho hubkaas.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Maeykanka, Mike Pompeo, ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu wadahadal dhab ah la geli doona Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un, waa haddii si dhab ah horumr looga sameeyo arrintaas.
Gabar ay walaalo yihiin Kim iyo saraakiisha sare ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegaya in aysan suurtagal ahayn in Trump uu arrimahaas ka dhiganayo guul siyaasadeed oo uu gaaray.
Kuuriyada Waqooyi ayaa in muddo ah ku raad joogtay helitaanka hub nukleer ah oo ay isaga difaacdo khatar walba oo dibadda uga timaado, balse khubaro ah waxay aaminsan yihiin in ay uga sii dareyso xaaladda wadankaas, Kim na ay u oggolaneyso in siyaasado adag uu kusii maamulo dalkaas.
Si walba oo ay noqotaba, way adag tahay in Kuuriyada Waqooyi ay heshiis ka gasho hubka nukleerka, maadaama dalal uu ka mid yahay Mareykanka ay dhowr jeer kulamo la yeesheen, natiijo wax ku ool ahna aanan laga gaarin.